Akụkọ - Mkparịta ụka na teknụzụ mgbasa ọkụ nke etiti data
Ọganihu ngwa ngwa nke iwu ụlọ data na-eduga n'ịbawanye akụrụngwa n'ime ụlọ kọmpụta, nke na-enye ọnọdụ ikuku na-ekpo ọkụ mgbe niile na iru mmiri maka ebe data. Oriri ike nke ebe data ga-abawanye nke ukwuu, na-esote mmụba nke nha nke usoro jụrụ oyi, usoro nkesa ike, elu na generator, nke ga-eweta nnukwu nsogbu na oriri ike nke data data. N'oge mba dum na-akwado nchekwa nchekwa na mbelata ikuku, ọ bụrụ na ụlọ ọrụ data na-eri ike ọha na eze n'ụzọ kpuru ìsì, ọ ga-adọrọ mmasị gọọmentị na ndị mmadụ. Ọ bụghị naanị na ọ naghị akwado mmepe nke etiti data n'ọdịnihu, kamakwa ọ na-emegide ụkpụrụ omume ọha mmadụ. Ya mere, oriri ike aghọwo ihe kachasị emetụ n'ahụ na-ewu ụlọ data. Iji zụlite ebe data, ọ dị mkpa iji nọgide na-amụba ọnụ ọgụgụ na ịbawanye akụrụngwa. Enweghị ike ibelata nke a, mana ọ dị mkpa ka emeziwanye ọnụọgụ akụrụngwa n'ọrụ. Akụkụ ọzọ dị ukwuu nke oriri ike bụ ikpo ọkụ ọkụ. Oriri ike nke sistemu ikuku ikuku data na-akpata ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụzọ n'ụzọ atọ nke oriri ike nke etiti data niile. Ọ bụrụ na anyị nwere ike imekwu mgbalị na nke a, mmetụta nchekwa ike nke ebe data ga-adị ngwa ngwa. Yabụ, kedu ihe teknụzụ na-ekpo ọkụ ọkụ na etiti data na kedu ihe ntụzịaka mmepe ga-eme n'ọdịnihu? A ga-achọta azịza ya n'isiokwu a.
Usoro ikuku jụrụ oyi
Sistemụ mgbasawanye ikuku jụrụ oyi na-aghọ sistemu ikuku jụrụ oyi. N'ime usoro ikuku jụrụ oyi, ọkara nke sekit mgbasa ozi refrigerant dị na ikuku ikuku nke ụlọ igwe data center, na ndị ọzọ dị n'ime ikuku ikuku dị n'èzí. A na-amanye okpomọkụ dị n'ime ụlọ igwe n'ime ebe dị n'èzí site na pipeline na-ekesa refrigerant. Ikuku na-ekpo ọkụ na-ebufe ọkụ na ikuku evaporator wee banye na refrigerant. Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ na nke dị elu na-ezigara na condenser n'èzí site na compressor wee mee ka okpomọkụ dị na mbara igwe dị n'èzí. Ike ike nke ikuku jụrụ oyi dị ntakịrị, na ọkụ na-ekpochapụ ozugbo site na ifufe. Site n'echiche nke jụrụ oyi, isi oriri ike na-abịa site na compressor, onye na-anụ ọkụ n'ime ụlọ na ikuku na-ekpo ọkụ n'èzí. N'ihi nhazi nke etiti nke akụkụ ndị dị n'èzí, mgbe a na-agbanye ihe niile dị n'èzí n'oge okpomọkụ, nchịkọta okpomọkụ nke mpaghara pụtara ìhè, nke ga-ebelata arụmọrụ refrigeration ma na-emetụta mmetụta eji eme ihe. Ọzọkwa, ụda nke ikuku na-ekpo ọkụ n'èzí na-enwe mmetụta dị ukwuu na gburugburu ebe obibi, nke dị mfe inwe mmetụta na ndị bi na gburugburu. Enweghị ike ịnakwere oyi dị n'okike, na nchekwa ike dị ntakịrị. Ọ bụ ezie na arụmọrụ dị jụụ nke usoro ikuku ikuku adịghị elu na ike ike ka dị elu, ọ ka bụ usoro nju oyi kachasị eji eme ihe na ebe data.
Usoro ikuku jụrụ oyi nwere ọghọm ya na-apụghị izere ezere. Ụfọdụ ebe data amalitela ịgbanye na mmiri jụrụ oyi, nke a na-ahụkarị bụ usoro mmiri jụrụ oyi. Usoro mmiri jụrụ oyi na-ewepụ okpomọkụ site na efere mgbanwe okpomọkụ, na refrigeration kwụsiri ike. A chọrọ ụlọ elu jụrụ oyi n'èzí ma ọ bụ ihe nju oyi akọrọ iji dochie condenser maka mgbanwe okpomọkụ. Mmiri jụrụ oyi na-akagbu otu ikuku dị n'èzí, na-edozi nsogbu mkpọtụ ma nwee mmetụta dị nta na gburugburu ebe obibi. Usoro mmiri dị jụụ dị mgbagwoju anya, dị oke ọnụ ma sie ike ịnọgide na-enwe, ma ọ nwere ike izute ihe dị jụụ na nchekwa ike nke nnukwu ebe data. Na mgbakwunye na mmiri jụrụ oyi, enwere mmanu mmanu. E jiri ya tụnyere mmiri jụrụ oyi, usoro mmanu mmanu nwere ike ibelata oriri ike. Ọ bụrụ na a nakweere usoro mmanu mmanu mmanu, nsogbu uzuzu nke ikuku oyi nke omenala adighizi adi, ike oriri dikwa ala. N'adịghị ka mmiri, mmanụ bụ ihe na-abụghị polar, nke na-agaghị emetụta sekit agbakwunyere eletrọnịkị na ọ gaghị emebi ngwaike dị n'ime nke ihe nkesa ahụ. Otú ọ dị, usoro mmiri jụrụ oyi na-abụkarị égbè eluigwe na mmiri ozuzo na ahịa, na ole na ole data center ga-agbaso usoro a. N'ihi na usoro mmiri jụrụ oyi, ma imikpu ma ọ bụ ụzọ ndị ọzọ, chọrọ nzacha nke mmiri mmiri iji zere nsogbu dị ka mkpokọta mmetọ, oke sedimenti na uto ndu. Maka sistemu mmiri, dị ka sistemu mmiri jụrụ oyi na ụlọ elu jụrụ oyi ma ọ bụ usoro evaporation, ọ dị mkpa ka a gwọọ nsogbu sedimenti na mwepụ nke uzuoku na olu enyere, ọ dịkwa mkpa ka ekewapụ ha na "ịchụpụ", ọbụlagodi na ọgwụgwọ dị otú ahụ. nwere ike ịkpata nsogbu gburugburu ebe obibi.
Sistemụ ikuku na-ekpo ọkụ ma ọ bụ adiabatic
Nkà na ụzụ na-ekpo ọkụ evaporative bụ usoro nke ikuku jụrụ oyi site na iji mbelata okpomọkụ. Mgbe mmiri zutere ikuku na-ekpo ọkụ na-asọpụta, ọ na-amalite ịpụta ma ghọọ gas. Mgbasa ọkụ na-ekpo ọkụ na-adịghị mma maka refrigerants na-emerụ gburugburu ebe obibi, ọnụ ahịa ntinye dị ala, compressor omenala adịghị mkpa, oriri ike dị ala, ọ na-enwekwa uru nke nchekwa ike, nchebe gburugburu ebe obibi, akụ na ụba na imeziwanye ikuku nke ime ụlọ. . Igwe nju oyi nke evaporative bụ nnukwu ihe na-adọta ikuku na-ekpo ọkụ n'elu mmiri mmiri. Mgbe mmiri dị na pad mmiri ahụ na-ekupụ, ikuku na-ajụ oyi ma chụpụ ya. Enwere ike ịchịkwa okpomọkụ site na ịhazigharị ikuku nke ngwa nju oyi. Adiabatic jụrụ oyi pụtara na n'usoro nke adiabatic ịrị elu nke ikuku, ikuku ikuku na-ebelata na mmụba nke ịdị elu, ikuku ikuku na-arụkwa ọrụ n'èzí n'ihi mgbasawanye olu, na-ebute mbelata nke ikuku ikuku. Ụzọ ndị a jụrụ oyi ka bụ ihe ọhụrụ maka ebe data.
Sistemu jụrụ oyi mechiri emechi
A na-emechi okpu radiator nke sistemu jụrụ oyi ma tinyekwa tankị mgbasawanye. N'oge a na-arụ ọrụ, uzuoku coolant na-abanye na tank mgbasawanye wee laghachi na radiator mgbe ọ jụrụ oyi, nke nwere ike igbochi nnukwu ikuku evaporation nke coolant ma melite ebe okpomọkụ nke coolant. Usoro nju oyi mechiri emechi nwere ike hụ na injin anaghị achọ mmiri jụrụ oyi maka afọ 1 ~ 2. N'iji ya eme ihe, a ghaghị ijide n'aka na mkpuchi ahụ iji nweta mmetụta. Enweghị ike ijupụta coolant na tank mgbasawanye, na-ahapụ ohere maka mgbasawanye. Mgbe afọ abụọ nke ojiji, igbapu na iyo, na-anọgide na-eji mgbe ukpụhọde mejupụtara na kefriza ebe. Ọ pụtara na ezughị oke ikuku ikuku dị mfe ime ka ikpo ọkụ dị n'ógbè ahụ. A na-ejikọtakarị ihe nju oyi mechiri emechi na mmiri jụrụ oyi ma ọ bụ mmiri oyi. Enwere ike ịme usoro mmiri jụrụ oyi ka ọ bụrụ usoro mechiri emechi, nke nwere ike ịgbasa ọkụ nke ọma ma melite arụmọrụ refrigeration.
Na mgbakwunye na usoro ikpo ọkụ ọkụ ewepụtara n'elu, e nwere ọtụtụ ụzọ ikpo ọkụ dị ebube, ụfọdụ n'ime ha ka etinyere na omume. Dịka ọmụmaatụ, a na-anakwere ikpochapụ okpomọkụ sitere n'okike iji wuo ebe data dị na mba Nordic oyi ma ọ bụ n'akụkụ oké osimiri, na "oke oyi miri emi" na-eji ajụkwa akụrụngwa dị na ebe data. Dị ka ebe data Facebook dị na Iceland, ebe data Microsoft dị n'oke osimiri. Na mgbakwunye, mmiri jụrụ oyi enweghị ike iji mmiri ọkọlọtọ. Enwere ike iji mmiri mmiri, mmiri mkpofu ụlọ na ọbụna mmiri ọkụ na-ekpo ọkụ na ebe data. Dịka ọmụmaatụ, Alibaba na-eji mmiri nke ọdọ mmiri Qiandao maka ikpochapụ okpomọkụ. Google eguzobela ebe data na-eji mmiri mmiri na-ekpo ọkụ na hamina, Finland. EBay arụwo ụlọ ọrụ data ya n'ime ọzara. Nkezi okpomọkụ dị n'èzí nke data center bụ ihe dịka 46 degrees Celsius.
Ihe dị n'elu na-ewebata teknụzụ ndị a na-ahụkarị nke mgbasa ozi etiti data, ụfọdụ n'ime ha ka na-aga n'ihu na-aga n'ihu ma ka bụ teknụzụ ụlọ nyocha. Maka ọnọdụ dị jụụ nke ebe data dị n'ọdịnihu, na mgbakwunye na ụlọ ọrụ mgbakọ na mwepụ na-arụ ọrụ dị elu na ebe data ndị ọzọ dabeere na Ịntanetị, ọtụtụ ebe data ga-aga n'ebe ndị nwere ọnụ ala dị ala na ọnụ ala ike. Site n'inwe teknụzụ jụrụ oyi dị elu karị, ọrụ na nrụzi nke ebe data ga-ebelata ma na-arụ ọrụ ike.
Oge nzipu: Ọgọst-02-2021